Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > About
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) waa isbahaysi gobolka oo dhan ah, oo xubin ka ah xubin ka mid ah muhaajiriinta, iimaanka, shaqada, dhalinyarada, bulshada, ganacsatada iyo ururada isbahaysiga oo la aasaasay 2002 si loo wanaajiyo nolosha muhaajiriinta iyo qaxootiga iyagoo ka dhigaya Colorado soo dhaweyn, soogalooti -wax saaxiibtinimo.
CIRC waxay ku guuleysaneysaa hadafkan iyada oo loo marayo kaqeybgalka bulshada ee aan xisbiyada ahayn, waxbarashada dadweynaha, iyo u doodista siyaasadaha socdaalka ee shaqeynaya, caddaaladda iyo aadanaha.
CIRC waxay aamminsan tahay karaamada iyo xuquuqaha aadanaha ee qof walba, iyadoon loo eegin xaaladda socdaalka. CIRC waxay qiyaastay bulsho dadka oo dhan loola dhaqmo si sharaf iyo ixtiraam leh oo ay si siman ugu heli karaan shaqo caddaalad ah oo caddaalad ah, guriyeyn, daryeel caafimaad, waxbarasho iyo fursad ay kula noolaadaan iyagoo midaysan xubnaha qoyska.
U doodista xuquuqda dhammaan muhaajiriinta iyo qaxootiga iyo qoysaskooda.
Awood siinta bulshada soogalootiga ah adoo taageeraya sameynta ururada aasaasiga ah.
Kor u qaadida hormarinta hogaaminta ee dhamaan bulshada soogalootiga ah.
Kordhi wacyiga bulshada ee ku saabsan tabarucaada bulsho / dhaqaale ee soo galootiga.
In bulshada guud lagu baro arrimaha iyo xaqiiqooyinka socdaalka.
In la xoojiyo wada shaqeynta ka dhaxeysa ururada kala duwan ee soogalootiga ah iyo kooxaha lagu takooro laguna takooro bulshada guud.
Ballaari wadashaqeynta iyo iskuduwida ururada soogalootiga iyo xulafada.